. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ညီမျှချက် (သို့) မညီမျှချက်
ရေစက်က တော်တော်ဆန်းကျယ်တယ် .. တနေရာစီကနေ ဆုံတွေ့ကြတယ် .. တွေ့ကြတယ် .. ခင်ကြတယ် .. ရေစက်ကုန်တော့လည်း အဝေးဆုံး ဝေးသွားပြန်တယ် .. ရေစက်ကုန်ပြီဆို တချိန်က သိပ်ချစ်ကြသူတွေ အမုန်းပွားကြတယ် .. အရင်က စကားတွေ တွတ်ထိုးနေတတ်ပေမယ့် ခုချိန် ပြောစရာစကားရှာမတွေ့ကြဘူး .. အရင်က မမြင်ရင် မနေနိုင်ကြသူတွေ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ရင်တောင် မျက်နှာလွှဲသွားတတ်ကြတယ် .. ပုခုံးချင် တိုက်ခဲ့ကြတယ် .. ရေစက်ကုန်ပြီဆို ဘာမှမတတ်နိုင်ကြတော့ဘူး ..
ခင်ကြတယ်တဲ့ .. သိပ်ခင်တာပဲတဲ့ .. အမြဲတမ်းခင်ချင်တယ်တဲ့ .. ဘာလို့ခင်တာလဲ .. ဘာလို့အမြဲတမ်းခင်ချင်ကြတာလဲ .. အဲဒီအချိန်က သူ့အပေါ် ကောင်းခဲ့လို့ပေါ့ .. ကိုယ့်ပေါ်ကောင်းတဲ့လူကိုဆို လူတိုင်းက ခင်ချင်ကြတယ် .. ချစ်ကြတယ် .. သူက သိပ်ကောင်းတာကိုး .. သူမကောင်းတော့ရင်ရော .. မခင်တော့ဘူးလား .. မခင်ချင်တော့ဘူးလား ..
လူတိုင်းက အကောင်းဆုံးကို ရဖို့ မျှော်လင့်ကြတယ် .. ကောင်းမယ်လို့ထင်ရရင် အဲဒီအရာပေါ်ကို တွယ်တာတတ်ကြတယ် .. ကိုယ်မျှော်လင့်သလိုဖြစ်မလာရင် စိတ်ကုန်စိတ်ပျက်သွားတတ်တယ် .. ဆက်ပြီးလည်း အဲဒီအရာပေါ်ကို တွယ်မက်မနေကြတော့ဘူး .. တရားရဲ့လား .. ဖြစ်သင့်ရဲ့လား ..
ဘာကြောင့် သူ အရင်ကလို မကောင်းနိုင်တော့တာလဲ .. ဘာအကြောင်းရှိလဲ .. သူ့မှာ ခံစားချက်တွေရှိနေလား .. အခက်အခဲတွေရှိနေလား .. အဲလိုစဉ်းစားပေးတတ်တဲ့လူတွေ ရှိပေမယ့် ရှားပါးတယ် .. အများစုက ကိုယ့်ကိုယ်သိပ်ချစ်တဲ့ အတ္တ သိပ်ကြီးကြတယ် .. ကိုယ်အရင်ရချင်တယ် .. ကိုယ်က ပြန်ပေးနိုင်ဖို့ စဉ်းစားကြရဲ့လား .. သူ့လိုအပ်ချက်ဘာလဲ စဉ်းစားပေးရဲ့လား .. သူ့ဖို့ဆိုပြီး မစဉ်းစားပေးနိုင်ရင်တောင် သူခက်ခဲနေမလားလို့ နားလည်ပေးတတ်ကြရဲ့လား ..
တချို့က ကိုယ့်ခံစားချက်တွေကို ရင်သိပ်ဖွင့်ချင်တယ် .. သူသာ ကိုယ်ပြောတာတွေကို နားထောင်ပေးနေမယ် နှစ်သိမ့်ပေးနေမယ် နားလည်ပေးနေမယ် ၀င်ရောက်ခံစားပေးနေမယ်ဆို ဒီလူကို ခင်တွယ်လိုက်ကြတာ .. ချစ်လိုက်ကြတာ .. သူသိပ်ကောင်းတာပဲ .. ငါ့ကို သိပ်နားလည်ပေးတာပဲ .. အရမ်းသဘောကျကြတယ် .. နားမထောင်ပေးနိုင်တဲ့အခါ ၀င်ရောက်ခံစားပေးဖို့ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အခါ သူငါ့ကို ဂရုမစိုက်ဘူး အလေးအနက်မထားဘူး ငါကတော့ သူ့ကိုချစ်လိုက်ရတာ သူကတော့ဆိုပြီး စကားသံတွေနဲ့ ကိုင်ပေါက်တတ်ကြတယ် .. တရားပါရဲ့လား .. ကိုယ့်မှာပဲ အခက်အခဲရှိတတ်သလား .. သူက အားလုံးပြည့်စုံနေသူလား .. သူ့မှာရော အပူအပင်မရှိဘူးလား .. အခက်အခဲမရှိဘူးလား ..
နဲနဲလေးတော့ တွေးပေးစေချင်တယ် .. ကိုယ်ကပဲရချင်နေသလား .. ဒါဟာ တရားပါရဲ့လား .. ကိုယ်က နဲနဲပေးပြီး များများလိုချင်နေမိလား .. ဒါဟာ တရားမျှတပါရဲ့လား .. နောက်ဆုံးမေးချင်တာက ကိုယ့်ဘက်ကနေ အရင်ဆုံး ပေးဖို့ စဉ်းစားမိဘူးလား .. ကြိုးစားမိဘူးလား ..
သူ့ကိုဘာလို့ချစ်တာလဲ .. သူသိပ်ကောင်းလို့ပါ ..
ရေးသားသူ moekhar at 4/28/2009 10:58:00 PM